Kulesi sithombe esithi “INKOSI uNkulunkulu yabenzela u-Adamu nomkakhe iziphuku zesikhumba, futhi wabambathisa,” hlobo luni lwendima uNkulunkulu ayidlalayo lapho eno-Adamu no-Eva? UNkulunkulu wayevela ekuyiphi indima kubantu ababili kuphela ababesemhlabeni? Kwakuyindima kaNkulunkulu? ... UNkulunkulu wadala laba bantu ababili futhi wabaphatha njengabangani Bakhe. Njengokuwukuphela kwamalungu omndeni Wakhe, uNkulunkulu wanakekela ukuphila kwawo nezidingo zawo eziyisisekelo. Lapha uNkulunkulu uvela njengomzali ka-Adamu no-Eva. Nakuba uNkulunkulu enza lokhu, umuntu akaboni ukuthi uNkulunkulu uphakeme kangakanani; akawaboni amandla amakhulu kakhulu kaNkulunkulu, izimangaliso Zakhe, futhi okubi nakakhulu ukuthi abawaboni amandla Akhe angenamkhawulo. Akubonayo nje ukuzithoba kukaNkulunkulu, uthando Lwakhe, ukukhathalela abantu, nesibopho Sakhe nendlela amnakekela ngayo. Indlela uNkulunkulu aphatha ngayo u-Adamu no-Eva iyafana nendlela abazali abakhathalela ngayo izingane zabo. Iphinde ifane nendlela abazali abangabantu abonothando ngayo, abanakekela ngayo amadodana namadodakazi abo—ingokoqobo, iyabonakala, futhi inokwethenjelwa. Esikhundleni sokuzibeka endaweni ephakeme nenkulu, uNkulunkulu wasebenzisa izikhumba ukuze enzele abantu okokwembatha. Akunandaba ukuthi leli jazi loboya lalisetshenziselwa ukuvikela isithunzi sabo noma ukubavikela emakhazeni. Ngamafuphi, lesi sembatho esasisetshenziselwa ukumboza umzimba womuntu sasenziwe uNkulunkulu mathupha ngezandla Zakhe. Kunokuthi asenze ngezindlela eziyimfihlakalo njengoba abantu becabanga, uNkulunkulu wenza into umuntu ayecabanga ukuthi ngeke akwazi ukuyenza futhi kwakungafanele ayenze. Lokhu kungenzeka yinto elula ongaboni ngisho nesidingo sokuthi ishiwo, kodwa ivumelana nabo bonke labo abalandela uNkulunkulu kodwa abebenemicabango eyinqaba ngaye ukuba baqonde ubuqotho nothando Lwakhe futhi babone ukwethembeka nokuthobeka Kwakhe. Kwenza omacaphuna-kusale abanobugovu abacabanga ukuthi baphakeme futhi banamandla amakhulu babe namahloni ngenxa yobuqotho nokuzehlisa kukaNkulunkulu. Lapha, ubuqotho nokuthobeka kukaNkulunkulu kwenza abantu babone uthando ayilo. Ngokuqhathanisa, ubukhulu bukaNkulunkulu, uthando lukaNkulunkulu, namandla amakhulu kaNkulunkulu ezinhliziyweni zabantu amancane, akukhangi, futhi ngeke kukwazi ngisho nokumelana namagalelo angatheni. Lapho ubona ivesi futhi uzwa indaba, ingabe umbukela phansi uNkulunkulu ngenxa yokuthi wenza leyo nto? Abanye bangase bambukele phansi, kodwa abanye bayokwenza okuphambene nalokho. Bayocabanga ukuthi uNkulunkulu uqotho futhi unothando, futhi ngempela kuwubuqotho bukaNkulunkulu nothando okubenza babe nogqozi. Lapho bebona khona uhlangothi lwangempela lukaNkulunkulu, yilapho beyokwazisa khona nakakhulu ukuba khona kothando lukaNkulunkulu, ukubaluleka kukaNkulunkulu ezinhliziyweni zabo, nendlela abesekela ngayo ngazo zonke izikhathi.
Okwedlule：II.UNkulunkulu Udala U-Eva